တဈသကျမှာတဈခါ ဖူးမွျောဖို့ ခဲယဉျးလှသော ဗုဒ်ဓမွတျစှာ ဘုရားရဲ့ အံတျော (အနီးကပျပုံ) - MDY News
တဈသကျမှာတဈခါ ဖူးမွျောဖို့ ခဲယဉျးလှသော ဗုဒ်ဓမွတျစှာ ဘုရားရဲ့ အံတျော (အနီးကပျပုံ)
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးမြှော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ကိုဖူးလိုက်ပါ
ကံထူးလို့ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့. ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် နှင့် ဆံတော်တစ် ဆူ ကိမ်းဝပ်နေတယ် လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
ရှေးဟောင်းသမိုင်းအစဉ် အလား အရ ရှေးကျတဲ့ မြို့တွေက အမည်နှစ်လုံးတည်း နဲ့ အမည်ပေးခဲ့တဲ့ တချိန်က မွန်ဒေသတွေပေါ့။ပုဂံ၊ရန်ကုန်၊တွံတေး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖျာပုံ၊ပုသိမ်၊စတဲ့ ရှေးကျတဲ့ မြို့တွေ အများကြီးပေါ့။အဲအထဲမှာ မွန်ဘုရင်များ အဆက်ဆက် အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ဖျာ ပုင်း ဆိုတဲ့ ထမင်းဈေးမြို့ကလေး တစ်ခုလည်း ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့။ကျိုက်ပတိုင်း စေတီ တော်မြတ်ကြီးကို မြန်မာ သက္ကရာဇ်(၆၀၀)ခုနှစ်မှာ တည်ထားကိုး ကွယ်ခဲ့တယ်။
လုပ်ဥကုန်ကျိုက်ခမွမ် စေတီတော်ကို မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၉၀၀)ခုနှစ် မှာ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးမှာ ရှိတဲ့ မြို့ပေါင်း များစွာမှာခရေပင်ဇောက်ထိုးပါက်တဲ့ မြို့ဆိုလို့ ဖျာပုံမြို့ တစ်မြို့ပါဘဲ။ဖျာပုံက ရှေးဘုရင်တွေ အဆက်ဆက် အုပ်စိုးခဲ့စဉ် က ရန်ကုန်၊ဒလ အပိုင်းပေါ့။ဖျာပုံကို မွန်ဘုရင်အဆက်ဆက် က အောင်မြေလို့ သက်မှတ်ခဲ့ကြတယ်၊ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။
ဖျာပုံကို မင်းဘေးရေဘေးအစရှိတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်စေရန် ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ရှေ့ထုံးနန်းစဉ်လာအရ။ဖျာပုံကို အလယ်တည့်တည့်ထား ၍ ကိုးနဝင်းရိုက်ပြီး တည်ခဲ့ပါတယ်လေ။ဖျာပုံကို ဗဟိုပြုပြီး ဖျာပုံပတ်ပတ်လည်မှာ ကြီးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာကြီး (၉)ရွာ၊ လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာကြီး(၉)ရွာ ပတ်ကာဝိုင်းလို့တည်ခဲ့တာပါ။
ဥပမါအနေနဲ့ပြောပြရင်…..သလိတ်ကြီး၊သလိတ်ကလေး။အခြားကြီး အခြာလေး၊မငေးကြီး၊မငေးလေး၊စသော အဲဒိလိုလိုိ ကြီး နဲ့ဆုံး လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာတွေ ပေါ့။
ရှေ့အဆက်ဆက် မွန် အခေါ်အခေါတွေက ယနေ့အချိန်ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။ရှေ့ဘက်ကမ်း၊အနောက်ဘက်ကမ်းပေါ့။အခုအရှေ့ဘက်ကမ်းဆိုတာက မွန်ပြည်နယ် ရေး စတဲ့ နေရာကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တာပေါ့၊အနောက်ဘက်ကမ်း ဆိုတာက ယခု ဖျာပုံမြို့ကို အနောက်ဘက်ကမ်းလို့ ခေါ်ဝေါ သမုတ်ခဲ့တာပါ။
သမိုင်းကို ခဏလေး ထားလိုက်ပါတော့ ရှည်သွားမှာဆိုးလိုပါ။အဲဒိအချိန်မတိုင်ကတည်း က ဖျာပုံ မှာ မြတ်စွာဘုရား အံတော်နှင့် ဆံတော် တစ်ဆူ ကိမ်းဝပ်ခဲ့တယ် သမိုင်းရှိခဲ့တယ်၊၊အဲဒိသမိုင်း က ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်၊ဘယ်ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် ။ပင်လယ်လမ်းကြောင်းက နေပြီး မြတ်စွာဘုရား ဆံတော် ပင့်ခဲ့တာလေ။
အခု ဖျာပုံ ကော့မှူး-တွံတေး -ဒလ လမ်းတလျောက်မှာရှေ့ဟောင်းစေတီတွေ အမြောက်အများ၊အဲဒိလမ်းအတိုင်း မှာ ရှိတဲ့ ဆံတော်ကြိုစေတီတော် ရှိတယ်တယ်လေတွံတေးမှာပေါ့။
ထားလိုက်ပါတော့ အခုဖျာပုံမှာ ရှိတဲ့ အံတော်က မြတတ်စွာဘုရား အံတော်လို သိရတယ်။ဖျာပုံမှာ ကိမ်းဝပ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ရာပေါင်းမက ကိမ်းဝပ်နေတာ ပါ။အံတော် ဘယ်ကကြွလာလည်း ဆိုတော့ ရသေကြီးတစ်ပါး က ယခု သရက်မြို့နယ် ပေါ့။အဲဒိအချိန်တုန်းကတော့ တောကြီးဖြစ်နေရင် ဖြစ်နေမှာပါ။အဲဒိမြို့အပိုင် ရွာကလေးတစ်ရွာ တောထဲ တရားထိုင်အားထုတ်နေစဉ် တော်နက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ထုံးဖြုစေတီ အပျက်ကြီးထဲကနေ ရောင်တော်တွေ ကွန့်မြူးနေလို့ရသေကြီးတစ်ပါးက
ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခဲ့ရာ ဖျာပုံ ယခုမင်းကျောင်း၊ သိုသိုိသိပ်သိပ် ကိမ်းဝတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ခေတ်အဆက်ဆက် မသမားသူတွေရဲ့ ခိုးယူလုယက်မှုတွေ ခံခဲ့ရမည်စိုးးရိမ်သောကြောင့်် ရှေးဘုရင်များနဲ့ ရသေ့ ဆရာတော်ကြီးများအဆက် ဆက် လုံခြုံစိတ်ချသော နေရာတွေပြောင်းရွေ့ကိမ်းဝပ် ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုဖျာပုံမြို့ ချောင်းတွင်းကျေးရွာ မြတ်ဘုန်းပွင့်မြတ်စွာဘုရား ကြီး ပရဝန်း၌ သမိုင်းအရ ဖျာပုံမင်းကျောင်း မှ ပြောင်းရွေ့ ကိမ်းဝပ်တော်မူနေသည်မှာ နစ်ပေါင်းရာချီနေပါပြီ။
ယနေ့ ဘုန်းဘုန်းလျောက်ထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် ပူဇော်ခွင့် တောင်းခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းသုသေန ဦးစီးဌာန မှလည်း အံတော်အစစ် မဟုတ်မဟုတ် သုတေသနလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အံတော်အစစ်ဖြစ်ပါကလည်းနစ်ရာထောင်ချီကိန်းဝပ်နေသောဖျာပုံမြို့ကလေးမှာနောင်လာနောင်သားများသာသနာပြုနိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားပေးပါရန်။
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနင့်တကွ ပူဇော်ဖူးမျှော်ခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက် တင်ပေးလိုိက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် အရ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖူးမျှော်ခွင့် ရတဲ့ အချိန် ကံစပ်လို့ သမိုင်းတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့နိုင်ပါပြီ။
တဈသကျမှာတဈခါ ဖူးမွှျောဖို့ ခဲယဉျးလှတဲ့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရဲ့ အံတျောကိုဖူးလိုကျပါ
ကံထူးလို့ဖြာပုံသူဖြာပုံသား မြား နှငျ့ မွနျမာ တဈပွညျလုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးခြိနျတနျ ဖူးထိုကျလို့. ဖူးမြှျောခှငျ့ရလို့ ထငျပါပွီ။ကြှနျတျောကလေးဘဝတညျး က ဘိုးဘိုး ၊ဘှားဘှား၊ဘိုဘေး အစဉျအဆကျကတညျး က ဖြာပုံမှာ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား အံ့တျော နှငျ့ ဆံတျောတဈ ဆူ ကိမျးဝပျနတေယျ လို့ သိခဲ့ရပါတယျ။
ရှေးဟောငျးသမိုငျးအစဉျ အလား အရ ရှေးကတြဲ့ မွို့တှကေ အမညျနှဈလုံးတညျး နဲ့ အမညျပေးခဲ့တဲ့ တခြိနျက မှနျဒသေတှပေေါ့။ပုဂံ၊ရနျကုနျ၊တှံတေး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖြာပုံ၊ပုသိမျ၊စတဲ့ ရှေးကတြဲ့ မွို့တှေ အမြားကွီးပေါ့။အဲအထဲမှာ မှနျဘုရငျမြား အဆကျဆကျ အုပျစိုးခဲ့တဲ့ ဖြာ ပုငျး ဆိုတဲ့ ထမငျးဈေးမွို့ကလေး တဈခုလညျး ပါဝငျခဲ့တာပေါ့။ကြိုကျပတိုငျး စတေီ တျောမွတျကွီးကို မွနျမာ သက်ကရာဇျ(၆၀၀)ခုနှဈမှာ တညျထားကိုး ကှယျခဲ့တယျ။
လုပျဥကုနျကြိုကျခမှမျ စတေီတျောကို မွနျမာ သက်ကရာဇျ ၉၀၀)ခုနှဈ မှာ တညျထားကိုးကှယျခဲ့ပါတယျ။မွနျမာတဈနိုငျငံ လုံးမှာ ရှိတဲ့ မွို့ပေါငျး မြားစှာမှာခရပေငျဇောကျထိုးပါကျတဲ့ မွို့ဆိုလို့ ဖြာပုံမွို့ တဈမွို့ပါဘဲ။ဖြာပုံက ရှေးဘုရငျတှေ အဆကျဆကျ အုပျစိုးခဲ့စဉျ က ရနျကုနျ၊ဒလ အပိုငျးပေါ့။ဖြာပုံကို မှနျဘုရငျအဆကျဆကျ က အောငျမွလေို့ သကျမှတျခဲ့ကွတယျ၊ယုံကွညျခဲ့ကွတယျ။
ဖြာပုံကို မငျးဘေးရဘေေးအစရှိတဲ့ ဘေးအန်တရာယျအပေါငျးမှ ကငျးလှတျစရေနျ ကငျးဝေးစရေနျအတှကျ ရှထေုံ့းနနျးစဉျလာအရ။ဖြာပုံကို အလယျတညျ့တညျ့ထား ၍ ကိုးနဝငျးရိုကျပွီး တညျခဲ့ပါတယျလေ။ဖြာပုံကို ဗဟိုပွုပွီး ဖြာပုံပတျပတျလညျမှာ ကွီးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရှာကွီး (၉)ရှာ၊ လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရှာကွီး(၉)ရှာ ပတျကာဝိုငျးလို့တညျခဲ့တာပါ။
ဥပမါအနနေဲ့ပွောပွရငျ…..သလိတျကွီး၊သလိတျကလေး။အခွားကွီး အခွာလေး၊မငေးကွီး၊မငေးလေး၊စသော အဲဒိလိုလို ကွီး နဲ့ဆုံး လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရှာတှေ ပေါ့။
ရှအေ့ဆကျဆကျ မှနျ အချေါအခေါတှကေ ယနအေ့ခြိနျကနျြရဈနဆေဲပါ။ရှဘေ့ကျကမျး၊အနောကျဘကျကမျးပေါ့။အခုအရှဘေ့ကျကမျးဆိုတာက မှနျပွညျနယျ ရေး စတဲ့ နရောကိုချေါဝျေါသမုတျခဲ့တာပေါ့၊အနောကျဘကျကမျး ဆိုတာက ယခု ဖြာပုံမွို့ကို အနောကျဘကျကမျးလို့ ချေါဝေါ သမုတျခဲ့တာပါ။
သမိုငျးကို ခဏလေး ထားလိုကျပါတော့ ရှညျသှားမှာဆိုးလိုပါ။အဲဒိအခြိနျမတိုငျကတညျး က ဖြာပုံ မှာ မွတျစှာဘုရား အံတျောနှငျ့ ဆံတျော တဈဆူ ကိမျးဝပျခဲ့တယျ သမိုငျးရှိခဲ့တယျ၊၊အဲဒိသမိုငျး က ဖွဈနိုငျခွရှေိတယျ၊ဘယျကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ဖွဈနိုငျခွရှေိတယျ ။ပငျလယျလမျးကွောငျးက နပွေီး မွတျစှာဘုရား ဆံတျော ပငျ့ခဲ့တာလေ။
အခု ဖြာပုံ ကော့မှူး-တှံတေး -ဒလ လမျးတလြောကျမှာရှဟေ့ောငျးစတေီတှေ အမွောကျအမြား၊အဲဒိလမျးအတိုငျး မှာ ရှိတဲ့ ဆံတျောကွိုစတေီတျော ရှိတယျတယျလတှေံတေးမှာပေါ့။
ထားလိုကျပါတော့ အခုဖြာပုံမှာ ရှိတဲ့ အံတျောက မွတတျစှာဘုရား အံတျောလို သိရတယျ။ဖြာပုံမှာ ကိမျးဝပျနတော နှဈပေါငျး ရာပေါငျးမက ကိမျးဝပျနတော ပါ။အံတျော ဘယျကကွှလာလညျး ဆိုတော့ ရသကွေီးတဈပါး က ယခု သရကျမွို့နယျ ပေါ့။အဲဒိအခြိနျတုနျးကတော့ တောကွီးဖွဈနရေငျ ဖွဈနမှောပါ။အဲဒိမွို့အပိုငျ ရှာကလေးတဈရှာ တောထဲ တရားထိုငျအားထုတျနစေဉျ တျောနကျထဲမှာ ရှိတဲ့ ထုံးဖွုစတေီ အပကျြကွီးထဲကနေ ရောငျတျောတှေ ကှနျ့မွူးနလေို့ရသကွေီးတဈပါးက
ပငျ့ဆောငျပူဇျောခဲ့ရာ ဖြာပုံ ယခုမငျးကြောငျး၊ သိုသိုသိပျသိပျ ကိမျးဝတျတျောမူခဲ့ပါတယျ။ခတျေအဆကျဆကျ မသမားသူတှရေဲ့ ခိုးယူလုယကျမှုတှေ ခံခဲ့ရမညျစိုးးရိမျသောကွောငျ့ ရှေးဘုရငျမြားနဲ့ ရသေ့ ဆရာတျောကွီးမြားအဆကျ ဆကျ လုံခွုံစိတျခသြော နရောတှပွေောငျးရှကေိ့မျးဝပျ ပူဇျောခဲ့ကွပါတယျ။
ယခုဖြာပုံမွို့ ခြောငျးတှငျးကြေးရှာ မွတျဘုနျးပှငျ့မွတျစှာဘုရား ကွီး ပရဝနျး၌ သမိုငျးအရ ဖြာပုံမငျးကြောငျး မှ ပွောငျးရှေ့ ကိမျးဝပျတျောမူနသေညျမှာ နဈပေါငျးရာခြီနပေါပွီ။
ယနေ့ ဘုနျးဘုနျးလြောကျထားပွီး ဓာတျပုံရိုကျခှငျ့ ပူဇျောခှငျ့ တောငျးခဲ့ပါတယျ။သမိုငျးသုသနေ ဦးစီးဌာန မှလညျး အံတျောအစဈ မဟုတျမဟုတျ သုတသေနလုပျပေးစခေငျြပါတယျအံတျောအစဈဖွဈပါကလညျးနဈရာထောငျခြီကိနျးဝပျနသေောဖြာပုံမွို့ကလေးမှာနောငျလာနောငျသားမြားသာသနာပွုနိုငျရေးအတှကျ စဉျးစားပေးပါရနျ။
ဓာတျပုံမှတျတမျးနငျ့တကှ ပူဇျောဖူးမြှျောခှငျ့ရနိုငျရနျအတှကျ တငျပေးလိုကျပါတယျ။ဆရာတျောကွီးရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြ အရ ကြှနျတျောရဲ့ ဖူးမြှျောခှငျ့ ရတဲ့ အခြိနျ ကံစပျလို့ သမိုငျးတဈခုကို ဖျောထုတျခဲ့နိုငျပါပွီ။
ရုပျထုမြားနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျကူးတဲ့နရောမှာ ဆရာကလြှနျးသူမြား
ကြိုကျထီးရိုး စတေီတျော ဆံတျောရှငျ ကြိုကျထီးရိုး ထီးတျော အနီးကပျဖူးမွျောနိုငျမယျ့မွငျကှငျးစုံမြား ကုသိုလျယူကွပါ